6 filim oo aad arki karto ka hor dhamaadka June | Bezzia
6 filim oo aad arki karto ka hor dhamaadka June
Maria vazquez | 18/06/2022 22:00 | Wararka
Si loola dagaallamo kulaylka sareeyo ee aan maalmahan la kulmeyno, kama fikiri karno qorshe ka fiican kan gabaad ka gal masraxa filimada. Filim wanaagsan, qaboojiye… Wax kale looma baahna! Lixdan filim ayaa soo baxay sabtida axada ama kuwa soo socda. U fiirso iyaga!
1 Miisaanka aan loo dulqaadan karin ee karti weyn
2 Qori isku dili mayno
3 waa inaad u timaadaa si aad u aragto
4 Camila caawa way baxaysaa
6 Taleefan Madow
Miisaanka aan loo dulqaadan karin ee karti weyn
Tilmaameedka Tom Gormican
Waxaa jilaya Nicolas Cage, Pedro Pascal iyo Alessandra Mastronardi
Taariikhda raac actor Nicolas Cage, kaasoo quus ka taagan inuu qayb ka noqdo filimka Quentin Tarantino. Waxaa intaa dheer, inuu xiriir aad u xun la leeyahay gabadhiisa tobaneeyo ah oo uu ku leeyahay deyn qoto dheer. deymahan ayaa ku qasbaya inuu kasoo muuqdo xaflada dhalashada bilyaneer reer Mexico ah oo taageere u ah shaqada jilaagan ee filimadiisii ​​hore, isagoo damacsan inuu tuso qoraal uu ku shaqayn jiray.
Markii uu ninka la xidhay, CIA waxay ku wargelisay in bilyaneerku dhab ahaantii yahay a kooxda daroogada ee kingpin kaasoo afduubtay gabar uu dhalay musharax u taagan xilka madaxtinimada Mexico. Intaa ka dib, waxaa shaqaaleysiisey dowladda Mareykanka si uu xog u helo.
Qori isku dili mayno
Tilmaameedka Mary Ripoll
Waxaa jilaya Ingrid Garcia Jonsson, Elena Martin, Joe Manjon
Iyadoo magaaladu isu diyaarinayso inay u dabaaldegto ciidaheeda ugu weyn, Virgen del Mar, Blanca waxay ku dadaalaysaa inay hubiso in paella ugu horeysa ee ay u diyaariso nolosheeda ay tahay mid qumman. Wuxuu ku guuleystey inuu soo ururiyo asxaabtiisa noloshii sanado ka dib oo aan is arag. Qaar waxay isku dayeen inay magaalada soo maraan, qaarna dibadda, midna tuulada ayuu iska joogay. Dhammaantood waa soddon jir, waxayna dareemeen in dhallinyaranimadooda siiba siibanayso.
Noloshoodu waxay u dhaxaysaa shaqo la'aan, caajisnimo iyo Bilow joogto ah ayaa dhamaaday. Paella waxay socotaa ilaa habeenkii, inta u dhaxaysa muujinta siraha, cayda iyo isfaham la'aanta. Iyo, ugu dambeyntii, verbena ayaa timaad: caddaynta in dunidu ay sii socoto in ay soo noqoto halka nolosha jilayaasha ay u muuqdaan inay sii xumaanayaan oo in ka badan weligood waxay u baahan doonaan midba midka kale si uu horay u sii socdo.
waa inaad u timaadaa si aad u aragto
Tilmaameedka Yoonis Trueba
Waxaa jilaya Itsaso Arana, Francesco Carril, Irene Escolar
Laba lammaane oo saaxiibbo ah mar kale ayay kulmaan. Waxay dhegaystaan ​​muusik, hadlaan, akhriyaan, wax cunaan, socdaan, ciyaaraan ping-pong... Waxaa laga yaabaa in aanay u ekaan wax badan oo filim ah, taasina waa sababta "waa inaad u timaadaa si aad u aragto".
Camila caawa way baxaysaa
Tilmaameedka Ines Maria Barrionuevo
Waxaa wada jilaya Nina Dziembrowski, Maite Valero, Adriana Ferrer, Carolina Rojas, Federico Sack iyo Guillermo Pfening
Camila way eegtaa lagu qasbay inuu u guuro Buenos Aires marka ayeeydii si xun u xanuunsato. Wuxuu ka tagay saaxiibadiis iyo dugsi sare oo dadweyne oo xor ah machad gaar loo leeyahay oo dhaqameed. Camila xanaaqeeda qallafsan laakiin degdega ah waa la tijaabiyay.
Tilmaameedka qortaa Luhrmann
Waxaa jilaya Austin Butler, Tom Hanks iyo Olivia DeJonge
filim nololeed agagaarka nolosha iyo muusiga Elvis Presley, isagoo diiradda saaraya xiriirka kakan ee uu la leeyahay wakiilkiisa dahsoon: Colonel Tom Parker. Filimku waxa uu dhexda ka galayaa dhaqdhaqaaqii murugsanaa ee u dhexeeyey Presley iyo Parker in ka badan 20 sano, laga soo bilaabo kor u kaca Presley ee caannimada ilaa xiddignimadiisa aan hore loo arag. Waxaas oo dhan waxay ka dambeeyaan daaha kobcinta dhaqanka iyo bisaylka bulsheed ee Maraykanka. Bartamaha safarkaas waa mid ka mid ah dadka ugu muhiimsan uguna saameynta badan nolosha Elvis, Priscilla Presley.
Tilmaameedka Scott Derrickson
Waxaa jilaya Mason Thames, Madeleine McGraw iyo Ethan Hawke
dilaa sadistic ah wuxuu afduubtay Finney Shaw, oo ah wiil xishood badan oo caqli badan oo 13 jir ah, wuxuuna ku xidhay dabaq hoose oo aan sanqadha lahayn oo qayladiisu aanay waxba tarayn. Marka taleefanka jaban ee khadka tooska ah uu bilaabo inuu garaaco, Finney wuxuu ogaaday inuu dhexda ka maqli karo codadka dhibanayaashii hore, kuwaas oo ay ka go'an tahay inay ka hortagaan Finney inay ku dhamaato iyaga oo kale.
Ma rabtaa inaad aragto mid ka mid ah filimadan? Qaarkood ayaa durba tiyaatarada saaran. Fiiri boodhka magaalada si aad u ogaato filimada aad hadda arki karto. Oo haddii aad dareento inaad ku raaxaysanayso taxane guriga in ka badan, hubi waxa u dambeeyay netflix sii daayo ama HBO.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » 6 filim oo aad arki karto ka hor dhamaadka June
Microcement: walxo baahida sare leh ee aduunka dib u habaynta
Mugwort: faa'iidooyinka caafimaad ee weyn